Development Network for Immigrants ─ အစုလိုက်ရောဂါကူးဆက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် CECC မှ အခန်းတွင်း လူ 100 ကျော်စုဝေးခြင်းနှင့် ပြင်ပ၌ လူ 500 ကျော်စုဝေးခြင်းတို့အား မပြုလုပ်ရန်လည်း အကြံပြုထားသည်။
အစုလိုက်ရောဂါကူးဆက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် CECC မှ အခန်းတွင်း လူ 100 ကျော်စုဝေးခြင်းနှင့် ပြင်ပ၌ လူ 500 ကျော်စုဝေးခြင်းတို့အား မပြုလုပ်ရန်လည်း အကြံပြုထားသည်။
Updated : 2020/4/21 下午 02:48:00
မတ်လ 25 ရက်တွင် ဗဟိုကပ်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးစင်တာ (CECC) မှ အစုလိုက်ရောဂါကူးဆက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် CECC မှ အခန်းတွင်း လူ 100 ကျော်စုဝေးခြင်းနှင့် ပြင်ပ၌ လူ 500 ကျော်စုဝေးခြင်းတို့အား မပြုလုပ်ရန်လည်း အကြံပြုထားသည်။
CECC မှ အထက်ပါစုဝေးမှုများပြုလိုသည့် စီစဉ်သူများအနေနှင့် COVID-19 ဖြစ်ပွားချိန် လူထုစုဝေးခြင်းအတွက် လမ်းညွှန်ချက်များတွင် ဖော်ပြထားသည့် အောက်ပါ အညွှန်းခြောက်ကို အခြေခံ၍ အန္တရာယ် အကဲဖြတ်မှုပြုလုပ်နိုင်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့သည်- 1. ပါဝင်သူများ၏ အချက်အလက်များကို ဦးစွာ ရယူနိုင်ခွင့်၊ 2. လေဝင်လေထွက်ပေါက်နှင့် အစားထိုးမှု၊ 3. ပါဝင်သူများအကြား အကွာအဝေး၊ 4. ပါဝင်သူများမှ နေရာတစ်ခုတည်းတွင် ရှိနေခြင်း ဟုတ်မဟုတ်၊ 5. အစီအစဉ်ကြာမြင့်ချိန်၊ 6. လက်သန့်စင်မှုနှင့် ခွဲခန်းဝင်မျက်နှာဖုံးများ၊ အကယ်၍ စုဝေးခြင်း အကဲဖြတ်မှှုမှ အန္တရယ်ရှိကြောင်းရှာဖွေ တွေ့ရှိပါက စုဝေးမှုကို နောက်ရွှေ့ရန် သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ရန် သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့် ပြုလုပ်ရန် CECC မှ အကြံပြုသည်။
ထို့အပြင် လမ်းညွှန်ချက်တွင် အကြံပြုထားသည့် အတိုင်း စီစဉ်သူသည် အစီအစဉ်မပြုလုပ်မီ ကပ်ရောဂါပြန့်ပွားခြင်း တားဆီးရန်အတွက် အရေးပေါ် အစီအစဉ်ကို ဖော်ဆောင်ရန် နှင့် အရေးပေါ် တုံ့ပြန်မှု နည်းလမ်းများ (သံသယရှိသူလူနာကို ခတ္တ သီးခြားခွဲထားခြင်း သို့မဟုတ် နေရာတစ်နေရာ စီစဉ်ပေးခြင်း၊ ဘေးကင်းရာဆေးရုံနှင့် ဘေးကင်းရာထွက်ခွာနိုင်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ အသိပေးကြေငြာခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ စသည်) တို့ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်လည်း CECC မှ ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင် တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှု ကာကွယ်ခြင်း စီမံကိန်းများ နှင့် အမှုထမ်း ကျန်းမာရေး စီမံခြင်း နှင့် ကြော်ငြာခြင်း နည်းတူ မစုဝေးမီနှင့် စုဝေးချိန်အတွင်း အကြံပြုထားသော ပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးထားရန် လိုအပ်ပါသည်။